सरकालाई चुनौतीः सरुवा भएरपनि कर्मचारी फिल्डमा काम गर्न किन गएनन ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
सरकालाई चुनौतीः सरुवा भएरपनि कर्मचारी फिल्डमा काम गर्न किन गएनन ?
संखुवासभा, ९ जेठ
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी सरुवा गरिए पनि खटाएका स्थानमा जान अटेर गरेका छन ।
सरुवा गरेको कर्मचारी जान अटेर गर्दै जिल्ला अस्पताल, खाँदबारीमा काजमा काम गर्दै आएका छन । स्वास्थ्य विभागबाट डेढ वर्ष अघि नै सरुवा पत्र आएपनि उनीहरु खटाएका ठाउँमा गएका छैनन् । अहिले पनि स्वास्थ्य कार्यालयका छ जना कर्मचारी सरुवा गरिएका स्थानमा नगएर जिल्ला अस्पतालमा काजमा काम गरिरहेका छन ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठका अनुसार आफू स्वास्थ्य चौकीमा हेल्थ असिस्टेन्ट विक्रम भुसाल, चैनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अनमी सुनिता घिमिरे, स्याबुन स्वास्थ्य चौकीमा अनमी सरस्वती शाह, माल्टा स्वास्थ्य चौकीमा अनमी रेनुका सुनाम, मनकामना स्वास्थ्य चौकीमा श्रेया घिमिरे र धुपू स्वास्थ्य चौकीमा राधिका कोइराला सरुवा भएका थिए । तर उनीहरु अहिलेसम्म सरुवा गरिएका स्वास्थ्य केन्द्र गएका छैनन ।
सरुवा गरिएका स्थानीय तहबाट काज फिर्ता गरिदिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पटकपटक पत्राचार समेत गरिएको छ । तर काज फिर्ताका लागि महिनौ अघि नगरपालिकाले लेखेको पत्रको अटेर गर्दै उनीहरु सदरमुकाम छोडेका छैनन ।
भारतबाट ल्याएको स्रोत नखुलेको रकम बरामद